အရိယာဟူသည် | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← လိုရင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အရေးကြီးသည်
လူ့အခွင့်ရေးဟူသည် … →
အရိယာများသည် တရားအားထုတ်ခြင်း၌ မရောင့်ရဲနိုင်ကြသူများ ဖြစ်သည်။ စာဆို၌ ကြာမျိုးငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ရေအိုင်၌ ဟင်္သာများ ပျော်မွှေ့သကဲ့သို့ အရိယာများသည် တရား၌ ပျော်မွှေ့ကြသည် ဟူ၍ အဆိုရှိသည်။ အရိယာများသည် ဤ၍ ဤမျှ တရားအားထုတ်ပြီးပြီ ထို့ကြောင့် တော်ပြီ၊ နားဦးမည်၊ တရား အားမထုတ်သေးဘူး ဟူသောသဘော မည်သည့် အခါမှမရှိ။ တရားဟူသည် အားထုတ်နိုင်လေလေ ကောင်းလေလေ ဖြစ်သည်ဟူ၍သာ ခံယူကြသည်။
အရိယာများ၌ ပုထုဇဉ်များတွင် မရှိသော အရိယာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ရှိသည်။ ထိုမဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင် ချင့်ချိန် သောအခါ ပုထုဇဉ်မျက်ကန်း ပရမ်းပတာများ လုပ်လေ့ လုပ်ထရှိသော ကိစ္စများအား မလုပ်ကြတော့ချေ။ ထို့ကြောင့် အရိယာများကို ကြည်ညိုရခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် အရိယာများသည် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်သွားမည်ဖြစ်ရာ သောတပန်မှ ရဟန္တာအထိ တိုးတက်ကြမည်သာ ဖြစ်သည်။ အရိယာ ဖြစ်သောအခါ ရုပ်နာမ်ကို နားလည်ထား သည်ဖြစ်၍ ရဟန်းကိစ္စ ပြီးစီးလိုသောသဘော ရှိကြပေလိမ့်မည်။ ဤကား တရားတော်၏ ဓမ္မသဘာဝပင် ဖြစ်သည်။
အရိယာတို့သည် အသင်္ခတဓာတ် မြတ်သောတရားကို နားလည်ကြသည်။ (၃၁)ဘုံမှအပ ဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်ဓာတ် မြတ်သောတရားကြီးအား သဘောပေါက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန်သို့ ပြေးဝင်နိုင်ရန် ကြိုးစားရာ၌ မရောင့်ရဲကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာ ဟူသည် မြစ်ကြီးငါးသွယ် မြစ်ငယ်ငါးရာ ချောင်း အဖြာဖြာမှ ရေများ စီးဆင်းသည်ကို တော်ပြီ၊ တန်ပြီ၊ ရောင့်ရဲပြီ၊ တင်းတိမ်ပြီ၊ ရပြီ၊ ၀ပြီ ဟူ၍ မရှိသကဲ့သို့ အရိယာများသည် နိဗ္ဗာန် စံဝင်ရာ၌ ၀သည် ဟူ၍ မရှိချေ – ထိုသို့ အဆိုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အရိယာ များသည် လွန်စွာ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။
အရိယာတို့၏ သဘောသဘာဝ၌ အတ္တကို ချေမှုန်းနိုင်သော စွမ်းရည်ရှိသည်။ အသင်္ခတဓာတ်သည် အတ္တအနှစ်သာရ ရှိသည်ဟု ယူဆသည်မှာ အဓမ္မ၀ါဒ ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်ကြီးများက သတ်မှတ်တော် မူကြပြီးဖြစ်သည်။ ဤသို့ တင်ပြရာ၌ မိမိ မပိုင်၊ မနိုင်သော အကြောင်းအရာများအား မှန်းဆ၍ လူအထင်ကြီးရန် ဖြစ်စေ၊ တနည်းနည်းနှင့် မှားယွင်းစွာ နှလုံးသွင်း၍ ဖော်ပြခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အသင်္ခတဓာတ်သည် အတ္တ အနှစ်သာရ မည်သို့မျှ မရှိနိုင်ချေ။
အတ္တအား ပယ်သတ်နိုင်သော စွမ်းရည် ရှိသောကြောင့်သာလျှင် အရိယာဖြစ်ပြီး ထိုအရိယာများ မျက်မှောက်ပြုသော အရာသည် အသင်္ခတဓာတ် ဖြစ်ရာ၊ အသင်္ခတဓာတ်၌ အတ္တအနှစ်သာရ ရှိသည် ဆိုသည်မှာ လွန်စွာ ဆိုးသော အယူအဆ တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ယခုအခါ မှေးမှိန် သေးသိမ်သွားသည် ဖြစ်၍ တော်ကာကျသေးသည်။ ဆရာတော်ကြီး များကလည်း ထိုဝါဒသည် အဓမ္မ၀ါဒ ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာတော်မူပြီး ဖြစ်သည်။
ဤအရာ၌ အရိယာ မပီသဘဲ အရိယာလိုလို ဘာလိုလို နိဗ္ဗာန်အကြောင်း အသင်္ခတဓာတ် အကြောင်းကို ပြောရာ၌ လွဲမှားစွာ ပြောခြင်းကြောင့် မှားယွင်းသော အယူအဆများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အသင်္ခတဓာတ် ဟူသည်မှာ ပြုပြင်စီရင်ခြင်း ကင်းသော အနုတ္တရဓာတ် နိဗ္ဗာန်ကို ဆိုလိုသည်။ ၄င်းကို အရိယာ များသာလျှင် ကျင်လည် ကျက်စားနိုင်ကြောင်း ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်သင့် ပေသည်။
မိမိက အသင်္ခတဓာတ် ဟူသည်ကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ တွေ့သိ၊ ထိမြင်၊ ၀င်စား၊ ခံစား ၊ နားလည်မှုနှင့် ကိုယ်တိုင်ကျင့်၍ သက်ရောက်ခြင်းမရှိမူဘဲ မှန်းဆသိနှင့် စွတ်ရွတ်ပြီး ပြောသောအခါ လွန်စွာ မှားယွင်းသော အယူအဆများ ဖြစ်နေသည် ဖြစ်၍ နောက်နှောင်းသူငါ လူတကာတို့ လမ်းလွဲရာသို့ ဖေါ်ညွှန်းရာ ရောက်သည်။
ဤသို့ မနိုင်မနင်း ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းသည် လွန်စွာမှ ဆိုးရွားသော အယူအဆများပင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်နိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်ရာမှသာလျှင် ကိုယ့်တန်ရာ တန်ရာသာ နှလုံးသွင်း သုံးသပ်သင့်ကြောင်း၊ သဘောရကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, ရဟန္တာ, အရိယာ, အသင်္ခတ, သောတပန်
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, ရဟန္တာ, အရိယာ, အသင်္ခတ, သောတပန်. Bookmark the permalink.
One Response to အရိယာဟူသည်
ွှThan Win says:
အရိယာများ၏ဂုဏ်ကို သိရှိရသည်မှာ လွန်စွာလေးစားကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ဂုဏ်ကို ဤကဲ့သို့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံစွာ အနှစ်သာရကို ထိုးဖောက်ဖော်ကြူးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအဆိုအဆုံးမ လမ်းညွှန်မှုများအတွက် ဆရာကြီးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။